Hiwaayadaha Ragga Stylish | Ragga Stylish
Helitaanka isku dheelitirnaanta shaqada iyo ku raaxeysiga hiwaayadeena iyo hiwaayadeena waa mid ka mid ah furayaasha lagu hago nolol buuxda.
Maaddaama fiirinta moobilka aan lagu tirin karin sida hiwaayad, halkan waxaan kuugu tuuraynaa wax yar fikrado leh qaab badan si aad ugu raaxeysan karto inta aad baraneyso wax cusub jiilaalkaan.
1 Niman waalan
2 Ciyaaryahan diiwaanka Retro
3 Kaamirada DSLR
TASCHEN daabacayaashu hadda waxay sii daayeen abaalmarintan taxaddar ahaan taxanaha ugu casrisan abid. Soo bandhigid farxad leh oo ah qaab kiis oo ay ku jiraan laba buug oo cabbirka XL ah. Dib u eegis faahfaahsan oo ku saabsan toddobadii xilli ee 'Mad Men'. Muga koowaad wuxuu bixiyaa qoraallo iyo qoraallo qoraallada ah, halka kan labaadna uu kashifayo sirta ugu fiican ee lagu hayo wax soo saarkan xarrago leh, oo ay ku jiraan dharkeeda la amaano.
Ciyaaryahan diiwaanka Retro
Waali ku haysa diiwaanka vinylka ayaa sii kordheysa. Haddii aadan wali jalaqsan, 2017 waa waqti fiican oo sidaas la yeelo, laakiin marka hore ha la qabto leexasho gadaal wanaagsan ah oo siinaysa taabasho qabow qolkaaga fadhiga, sida tan mid ka timid Crosley. Vinyl ka sokow, waxay dheeshaa CD-yo iyo cajalado, waxaana ku jira aaladda taleefanka gacanta ee casriga ah.
Haddii aad ka mid tahay kuwa daahfuray xiisaha ay u qabaan sawir qaadashada 'Instagram', waxaa la joogaa waqtigii loo gudbi lahaa heerka xiga. Telefoonada gacanta way fiicanyihiin, laakiin hadaad rabto soo qaado sawir qaadahaaga gudaha wakhtiga firaaqadaTixgeli inaad ku mashquusho kamarad DSLR ah.
Barashada ku ciyaarida aaladda wali ma tahay mid ka mid ah howlahaaga sugaya? Ka gudub liistadaada xilliga jiilaalka adiga oo hela ukulele. Way fududahay in la keydiyo oo la raro iyo, isagoo leh afar xadhig oo keliya, waxay ka dheereysaa gitaarka. Haddii aad u baahan tahay sababo dheeraad ah, xusuusnow in Eddie Vedder (Pearl Jam) uusan u baahnayn qalab kale oo ku saabsan albumkiisii ​​2011 'Ukulele Songs'.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Hiwaayado casri ah xilliga qaboobaha
Timaha ugu caansan ee ugu quruxda badan 2016